भर्खरै सुर्खेतमा दर्दनाक घटना , कारण थाहा पाएर उड्छ सबैको होश ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै सुर्खेतमा दर्दनाक घटना , कारण थाहा पाएर उड्छ सबैको होश !
भर्खरै सुर्खेतमा दर्दनाक घटना , कारण थाहा पाएर उड्छ सबैको होश !
admin April 18, 2018 समाचार 0
सुर्खेत — पञ्चपुरी नगरपालिका–२ सालकोटकी गीता चपार्इं र बराहताल–८ कुनाथरीका सुभाष बोहराबीच एक वर्षअघि साथी (परिवर्तित नाम लक्ष्मी) मार्फत चिनजान हुन पुग्यो । पहिलो भेटमै उनीहरूले मोबाइल नम्बर आदानप्रदान गरे । त्यसपछि बारम्बार फोन सम्पर्क हुन थाल्यो ।फोनबाटै उनीहरूबीच प्रेम झांगिँदै गयो । अन्तत: एकले अर्कालाई छुट्नै नसक्ने माया बस्यो । दुवैजनाले असार
६ गते सालकोटको पलैटेबजारमा भेट गरे । भेटपछिको फोनमा विवाह गर्ने निष्कर्षमा पुगे, गीता र सुभाष ।फोन कुराकानी, दुईपटकको भेट तेस्रो पटकसम्म आउँदा शारीरिक सम्पर्कमा परिणत भयो । असारदेखि पुस ४ गतेसम्म पटक–पटकका भेटमा यौनसम्पर्क भयो । बिहेअघि नै गीता गर्भवती हुन पुगिन् । बिहे गर्न सुभाषलाई आग्रह गरिरहिन् । गीताको आग्रहलाई सुभाषले स्वीकार गरेनन् ।
यदि बिहे नगरे घरमा गएर आत्महत्या गर्ने गीताको धम्कीपछि सुभाष भेट्न बाध्य भए । अन्तिम भेट अर्थात् पुस ४ को राति ९ बजे उनीहरूबीच बिहेकै विषयमा विवाद भयो । विवादपछि बिहे गर्छु भनी आश्वासन दिएर जामुने जंगलमा लगेर गीतालाई भीरबाटै धकेलिदिए । गीताको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गीताको हत्यापछि फरार १९ वर्षीय सुभाषलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यही चैत २८ गते पक्राउ गर्‍यो ।
जामुनेमा माघ ९ गते टाउको (कंकाल) फेला पारेको प्रहरीले लामो अनुसन्धानपश्चात अभियुक्तलाई भुम्ती गाउँपालिका–४ काभ्रेबाट पक्राउ गर्‍यो । झन्डै चार महिनापछि पक्राउ परेका सुभाषले गीताको हत्या गरेको स्वीकारे । उनी काभ्रेमा लुकीछिपी मजुदरी गर्दै आएका थिए ।
भर्खरै सरकारले गर्यो यस्तो घोसणा , चाल्यो अहिले सम्मकै कडा कदम !
प्रधानमन्त्री सिरहा तर्फ जाँदै, यस्तो छ कार्यक्रम !
तुइनबाट खसेर ७७ बर्षिया कृष्णप्रसादको मृत्यु, कहिले हट्छ तुइन?